Universal Adjustable Long Arm Tablet & Phone Stand Holder - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ WoopShop®
မှစ. သင်္ဘောများ တရုတ်နိုင်ငံ ရုရှားပြည်ထောင်စု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စပိန် ပိုလန်
အရောင် 100cm အပြာ 100cm Rose ရွှေ 130cm အပြာ ပန်းရောင် 130cm 130cm ရွှေ 130cm ငွေရောင် 130cm နှင်းဆီရွှေ
တရုတ် / 100cm အပြာ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အပြာရောင် ၁၀၀ စင်တီမီတာ တရုတ် / 100cm နှင်းဆီပန်း ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / 100cm ROSE GOLD တရုတ် / 130cm အပြာ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အပြာရောင် ၁၀၀ စင်တီမီတာ တရုတ် / ၁၃၀ စင်တီမီတာပန်းရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / 130cm ပန်းရောင် ယူနိုက်တက်စတိတ် / အပြာ ၁၄ စင်တီမီတာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု / 100cm ROSE GOLD ယူနိုက်တက်စတိတ် / အပြာ ၁၄ စင်တီမီတာ ယူနိုက်တက်စတိတ် / ၁၃၀ စင်တီမီတာပန်းရောင် စပိန် / အပြာ ၁၀၀ စင်တီမီတာ စပိန် / 100cm ROSE GOLD စပိန် / အပြာ ၁၀၀ စင်တီမီတာ စပိန် / 130cm ပန်းရောင် ရုရှားပြည်ထောင်စု / 130cm ရွှေ တရုတ် / 130cm ရွှေ ယူနိုက်တက်စတိတ် / ၁၃၀ စင်တီမီတာရွှေ စပိန် / 130cm ရွှေ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / ၁၃၀ စင်တီမီတာငွေ၊ တရုတ် / 130cm ငွေရောင် ယူနိုက်တက်စတိတ် / ၁၃၀ စင်တီမီတာငွေရောင် စပိန် / ၁၃၀ စင်တီမီတာငွေ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / ၁၃၀ စင်တီမီတာနှင်းဆီရွှေ တရုတ် / 130cm နှင်းဆီရွှေ ယူနိုက်တက်စတိတ် / ၁၃၀ စင်တီမီတာနှင်းဆီရွှေ စပိန် / 130cm နှင်းဆီရွှေ ပိုလန် / ၁၃၀ စင်တီမီတာငွေ၊ ပိုလန် / 130cm နှင်းဆီရွှေ ပိုလန် / 130cm ရွှေ ပိုလန် / အပြာ 130cm ပိုလန် / 100cm နှင်းဆီပန်း ပိုလန် / အပြာ 100cm ပိုလန် / 130cm ပန်းရောင်
Universal Adjustable Long Arm Tablet & Phone Stand Holder - China / 100cm blue backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အရောင်: အပြာရောင်၊ ပန်းရောင်
စတိုင် - ၁၀၀ စင်တီမီတာနှင့် ၁၃၀ စင်တီမီတာအရွယ်အစားရှိသည်
တက်ဘလက်နှင့်လက်ကိုင်ဖုန်း ၄.၇ မှ ၁၁ လက်မ
ပုံစံအရောင် - ပန်းရောင်၊ အပြာ၊ အရွယ်အစား: ၁၀၀ စင်တီမီတာ၊ ၁၃၀ စင်တီမီတာ
B စတိုင်အရောင် - နှင်းဆီရွှေ၊ ရွှေရောင်၊ ငွေရောင်၊ အရွယ်အစား - ၁၀၀ စင်တီမီတာ၊ ၁၃၀ စင်တီမီတာ
သဟဇာတ: Ipad, Xiaomi, Samsung, Huawei, Kindle တို့အတွက်
ပစ္စည်း: ပလပ်စတစ် + မဂ္ဂနီစီယမ်လူမီနီယမ်အလွိုင်း
တက်ဘလက်နှင့်ဖုန်းလက်မ - ၄.၀ မှ ၁၁ လက်မ
အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ - ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတွက် Longarm၊ ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်ခြင်း၊ အိပ်ရာဘေးတွင်အလုပ်လုပ်နေသည့်ချိန်ညှိနိုင်သောရှည်လျားသောလက်မောင်း၊ စားပွဲခုံပေါ်တွင် Stand Holder Tablet
လုပ်ဆောင်ချက် - ဖုန်းဒါမှမဟုတ် tablet ကိုစားပွဲဒါမှမဟုတ်အိပ်ရာဘေးမှာထားပါ
56 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ဒါဟာသင့်ရဲ့သေတ္တာထဲမှာကောင်းကောင်းလာတယ်၊ သင်ဟာခက်ခဲပြီးခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုပြောနိုင်တယ်၊ ကြည့်ကောင်းတယ်၊ ငါအရမ်းပျော်တယ်။ မင်းငါ့ကိုစိတ်ပျက်အောင်မလုပ်ဘူး၊ ငါတို့သက်သေပြမယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်! မျိုးရိုးဗီဇကိုကြည့်ပါ ဦး! ဂရေဟမ်
အမှာစာမြန်မြန်တင်ပို့ခဲ့သည်။ စိန့်ပီတာစဘတ်ကိုရုရှားသို့တင်ပို့မှုသည် ၄ ​​ပတ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးထုတ်ကုန်မှာကောင်းစွာထုပ်ပိုးထားသည်။ ဖော်ပြခဲ့သည်အတိုင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါသည်, အရည်အသွေးကောင်းသည်။ iPad Pro4ကိုကောင်းမွန်စွာကိုင်ထားသည်။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့! ကျွန်တော့်ရဲ့တက်ဘလက်က ၁၀.၁ ရှိပြီးလေးလံတဲ့အရာတစ်ခုပါ
ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၊ သင်သည် ၁၀.၁ လက်မတက်ဘလက်ကိုမည်သည့်ပြwithoutနာမှမရှိဘဲကိုင်ထားနိုင်သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တကယ်တော့အံ့အားသင့်စရာပါ။ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ် ကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဒီပစ္စည်းကို ၁၀ ပေးရမယ်။